Nkọwapụta Semalt kọwara Nkọwa n'etiti SEO na Email Marketing
Email Marketing bụ otu n'ime ahịa ahịa kacha ochie, nke dịkwa SEO,emeela ka ndị ụlọ ahịa na-ere ahịa na-akwụ ụgwọ maka ROI dị elu. Otú ọ dị, ọrụ Email Marketing dị iche na atụmatụ, ọrụ,na egbu nke SEO. Na SEO, irè nke nkwenye na-adabere n'ikike nke ndị ọrụ nke gị, ndị ahịa, ụlọ ọrụ ibe,na ihe ha na-eme.
Artem Abgarian, Onye Nlekọta Ọrụ Ndị Ahịa nke Ọkachamara Digital Services na-akọwa otu esi emekota SEO na Email Marketing.
Ntucha Mgbasa Ozi Email
Ozugbo Email Marketing bụ ụzọ kachasị mma nke ọtụtụ ndị ji eme ihendị ahịa na ndị nwe ụlọ ahịa maka nkwado, iwu na ịnọgide na-enwe mmekọrịta n'etiti ndị ahịa, ọ na-aghọ akụkụ dị mkpa nke ọrụ ahụbara uru mgbalị. Ihe omuma email kachasị mma na-eme ka ndị ahịa ndị ọzọ nweekwu ma mezie atụmanya gị. N'okpuru ebe a bụ ndụmọdụ maka esi emenyochaa mgbasa ozi ahia email gị nke oma.
1. Họrọ ma tinye ego na nnukwu onye na-ahụ maka ọrụ email (ESP)emetụta nsogbu ị na-ere ahịa email zuru oke
2. Soro iwu CAN-SPAM iwu iwu kwadoro na IntanetNdị na-enye ọrụ (ISPs)
3. Mepụta ozi ederede ederede iji belata ohere nke nkwukọrịta gịịbanye na spam ebe ọ bụ na ọtụtụ ndị ọkacha mmasị na-ahọrọ ederede na-enweghị vidiyo vidio HTML
4. Zụlite gị na-eduzi site na ịnye ozi na-abụghị mgbasa oziburu ụzọ mee ka ndị ahịa nwee nkwenye ma mara ihe na-adọrọ mmasị ha..
5. Zụlite peeji nke ọdịda maka ngwaahịa, ọrụ, nankwalite, na inye ụdị edemede.
6. Kwado ọdịnaya. Ozi niile na-adọta ndị nnataịpị ga-adị n'elu mkpanaka maka ozi eletrọn niile. Dịka ọmụmaatụ, mgbakwunye na aha aha nke otu aha na-akpọ ọrụna-eduga na weebụsaịtị ma ọ bụ na-eji aha onye nnata na nhọrọ nke nchịkọta site na ụkpụrụ dịka ahọpụtara na email kacha mkpa.
7. Akpa ma deputa uto. Mgbakwunye nke nhazi tupuarụ ọrụ nwere ike iduga mkpụrụ ka elu ma pịa ọnụego.
8. Tinye mgbasa ozi mgbasa ozi na ọwa gị na-agụnye ndị ọbịa weebụna ndị na-aza email na mgbasa ozi ka ha wee nwee ike soro nzukọ gị.
Ijikọta SEO na Email Marketing
E nwere ụzọ abụọ iji duzie SEO Audit maka weebụsaịtị.
Inwe obi uto na mkpuru ederede echetara ka ohere oa na-agbanye akwụkwọ ahụ iji bulie elu na engines ọchụchọ. N'otu oge ahụ ozi bara uru na akwụkwọ akụkọ na ozi-e na-adọta mmasịndị na-agụ akwụkwọ ma na-enwewanye ọhụụ. N'okpuru ebe a, ị nwere ike ịchọta ụzọ ndị bụ isi isi mee ka ọnụ ọgụgụ dị mma nke SEO na Email-Marketing.
Iji usoro SEO kachasị mma mgbe ị na-eke ọdịnaya ala
Na-agbakwụnye akara mkpado na ahuhu email
Ịmepụta akwụkwọ e-newsletters maka nyochaa ọzọ
Na-ebugharị ahia ahia
Na-atụle isiokwu nke ozi ịntanetị
Na-ezipụ ozi ịntanetị site na itinye ọdịnaya
Ndepụta ozi-e nyochaa na nchịkọta Google
SEO na Email Marketing nwere oke ROI, ya mere ijikọ haenyere aka na nti ndi mmadu. Ịtụle ihe dịgasị iche iche na itinye usoro dị mfe maka ịmepụta akwụkwọ akụkọ ga-enyere gị akaọtụtụ n'ime mkpọsaahịa mgbasa ozi gị Source .